Inopa Backup Kamera YeMotokari, Inotungamirwa Rearview Backup Kamera, Yakatungamirwa Car Backup Kamera Kubva KuChina Mugadziri.
Shenzhen Sunveytech Co.,LTD [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Americas , Europe , Worldwide Exporter:71% - 80% Certs:CE, FCC, RoHS Tsanangudzo:Backup Kamera Yemota,Yakatungamirwa Rearview Backup Kamera,Yakatungamirwa Car Backup Kamera,Kutungamirirwa Hd Backup Kamera,,
Home > Products > Mota Backup Kamera > Yakatungamirwa Rearview Backup Kamera
Yakatungamirwa Rearview Backup Kamera
Zvigadzirwa zve Yakatungamirwa Rearview Backup Kamera , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Backup Kamera Yemota , Yakatungamirwa Rearview Backup Kamera vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Yakatungamirwa Car Backup Kamera R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Vehicle Parking System Kudzorera Rubatsiro Shockproof Night Vision Mini Yakavanzika Kamera
Backup Kamera yeVolkswagen
Backup Kamera yeRamu
Backup Kamera ye Subaru
Backup Kamera yeBuick
Backup Kamera yeAudi
Backup Kamera yeMitsubishi
Backup Kamera yeVolvo
Backup Kamera yeOdyssey
LED Backup Kamera yeSprinter
Yakakweretwa Metal Case Backup Kamera
Akatungamirwa Nechena Backup Kamera
LED Wired Backup Kamera
Shockproof uye Waterproof Metal Enclosure IR Night Vision HD Mota Kamera
Yakatungamirwa Mota Rearview Backup Kamera
Night Vision Rearview Backup Kamera
Packaging: Neutral Bhokisi kana Yakagadzirirwa Muvara Bhokisi
Vehicle Parking System Kudzorera Rubatsiro Shockproof Night Vision Mini Yakavanzika Kamera Reverse kamera yakavakirwa mune LATEST Giredhi A 6G All-girazi uye F1.8 hombe aperture lens, iyo lens yakatarisa angle ndeye 135 madhigirii (anooneka akareba kusvika pa91%), akakwana iwe kuti utarise iro risingaonekwe bofu...
Kumusoro kwakaiswa mini backup kamera, nyore kuisa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura mumvura. Uchishandisa...
9 Kutungamirwa yepasi rese backup kamera, nyore kuisa Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura mumvura....
18 Kutungamirwa yepasi rese backup kamera, nyore kuisa Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura mumvura....
Universal backup kamera ine maviri yokupaka sensors. Side yakaiswa mini backup kamera, nyore kuisa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa...
Reverse kamera ine 9 infrared IR inotungamirwa, iwe unogona kuona mufananidzo zvakajeka usiku. Kumusoro kwakaiswa mini backup kamera, nyore kuisa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chemvura isina mvura uye mumatope proof backup camera,...
Side yakaiswa mini backup kamera, nyore kuisa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura mumvura. Uchishandisa...
Kumusoro kwakakwiridzwa girazi bhaudhi kamera, kuiswa nyore. Mini yepfungwa kesi diki kumashure yakachengetedza backup kamera s inokodzera kumamota akawanda emhando kusanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe. IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro...
Kumusoro kwakakwiridzwa girazi bhaudhi kamera, nyore kuisa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura mumvura....
Shockproof uye Waterproof Metal Enclosure IR Night Vision HD Mota Kamera Reverse kamera yakavakirwa mune LATEST Giredhi A 6G All-girazi uye F1.8 hombe aperture lens, iyo lens yakatarisa angle ndeye 135 madhigirii (anooneka akareba kusvika pa91%), akakwana iwe kuti utarise iro risingaonekwe bofu nzvimbo uye chengeta...
Unit Price: USD 8.85 - 9.85 / Bag/Bags
Min. Raira: 300 Bag/Bags
Zvakanakira Unhu: 9 Infra-RED mwenje bheji kamera inopa iwe zvakajeka mufananidzo kunyange murima. IP67 isina mvura rearview backup kamera inokodzera kushanda mune angangoita mamiriro ekunze. Yakakwirira Mufananidzo Unhu: Kugadzirisa: 420 TV tambo; Anobudirira pixels: 648 X 488 pixels. Yepasirosi inogadziriswa...
Kumusoro kwakakwiridzwa girazi bhaudhi kamera, kuiswa nyore. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura mumvura....
China Yakatungamirwa Rearview Backup Kamera Vatengi
Inotungamirwa kumashure inochengetedza kamera inouya ne infrared kana chena LED, inonyatso kukubatsira iwe kuona mapofu mapofu murima, ita iwe kupaka uye kudzosera zviri nyore.
[Car backup camera neLEMA] Inonyatso kukubatsira iwe kuona mapofu mapofu murima kuita kuti iwe uchipaka uye udzore zvakanyanya nyore
[Waterproof IP68 Rating] Shandai zvakanaka mune dzese mamiriro ekunze, haufanirwe kunetseka nezvekupaka mota pazuva rinonaya.
[32FT hurefu hwakareba waya] Isu tinopa ZVIMWE ZVAKANYANYA kutarisa kuti kumashure kutarisa kamera kunogona kukwana kune akawanda mhando dzemotokari
[Tsvaga yevatengi] 30-Zuva Rekudzoka Mari Guarantee; 12 Month Replacement Waranti uye Nehupenyu Hwakawanda Kutsigira
Yakatungamirwa Car Backup Kamera
Kutungamirirwa Hd Backup Kamera
Backup Kamera Oem